यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन, तपाइ कुन बार जन्मनु भयो ? – Sandesh Munch
September 25, 2020 238
Prevशास्त्र भन्छ : पूजा गर्दा यो दिशामा दियो-बत्ति बाल्दा बढ्छ आयु
Next‘तपाईको हातमा X चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य
साप्ताहिक राशिफल भदाै २१–२७,२०७७
तपाईकाे शरिरमा ५० ठाउँमा भएकाे काेठीकाे फल
‘ऋणबाट मुक्त हुने ५अचुक उपाय
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84143)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27687)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12605)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12369)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11987)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11485)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10238)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9907)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9676)
पर्सि मंसीर २२ गते नायिका स्वेता खड्काको बिहे !
हेर्नुहोस् केटाले केटालाई नै सिन्दुर हालेर बिहे गरे, पण्डित नै भए आश्चर्यचकित ( भिडियो )
४ महा शक्तिशाली राशिका ब्याक्तिहरु जसको सामु झुक्ने छ पुरै दुनिया ! तिनीहरु हुन्छ राता रात मालामाल